Mepụta Mgbasa Twitter Dị Mfe na IFTTT | Martech Zone
N'ụtụtụ a, anyị gwa banyere Twitter na ụfọdụ nnukwu ndụmọdụ ha na-enye azụmahịa. Otu ndụmọdụ dị mkpa bụ iji usoro tweets mee ihe iji nwekwuo mmasị ma kwalite asọmpi ma ọ bụ ihe omume. Ọ bụrụ na ịnweghị iji ngwa ọrụ dịka Hootsuite ịtọọ oge tweets gị (nke ahụ bụ njikọ nke mmekọ anyị), mgbe ahụ ị ga-achọ ihe ọzọ maka ịhazi na ịhazi usoro tweets gị.Hootsuite ọbụna nwere nnukwu uploader ka ị nwee ike ịhazi Tweets gị na Excel ma bulite ya dị ka faịlụ CSV!
Otu nwụrụ anwụ dị mfe ma siri ike free ngwá ọrụ si n'ebe IFTTT, Ọ bụrụ na Nke a mgbe ahụ Nke ahụ. Enwere uda of oké Ezi ntụziaka maka maka azụmahịa na ahịa. Na nke a, anyị nwere ike iji ndị nhazi ịhazi Tweets.
Họrọ onye nhazi oge, tọọ ụbọchị gị, ma dee Tweets gị… nke ahụ dị mfe. Jide n'aka na itinye njikọ nke enwere ike ịgụta iji bit.ly ma ọ bụ ọrụ yiri ya. Anyị nwere omenala shortened URL ntọlite ​​na Hootsuite, kwa!).
Ebe ị na-aga. Tọọ otu izu ma ọ bụ Tweets, ikekwe 2 gaa 3 kwa ụbọchị, ma ị nwetala mkpọsa Twitter. Otu ihe edetu: onye nhazi ihe ga - ebute ihe omume a n’afọ ọ bụla… yabụ gbaa mbọ gbanyụọ usoro nri ma ọ bụrụ na ị naghị eme atụmatụ inwe mkpọsa ahụ kwa afọ!
Tags: free tweet nhazima oburu na nkaiftttifttt uzommeputanhazi ogemkpọsa twitterNtụziaka mkpọsa twitter
Daalụ maka ijikọta na post ifttt m na SocialMediarology.com!